Global Voices teny Malagasy » Aiza Ny Hatezerana Noho ilay Fanolanana Faobe Tao Sodàna Atsimo Rotiky Ny Ady? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Novambra 2015 6:26 GMT 1	 · Mpanoratra Ayo Awokoya Nandika Tantely
Sokajy: Afrika Mainty, Sodàna Atsimo, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Ireo vehivavy Sodàne Tatsimo mandihy mankalaza ny tsingerintaona voalohan'ny fahaleovantenan'ny fireneny, ny 9 Jolay 2012. Sary avy tamin'ny Mpitatitra vaovao#34145. Fizakàmanana© Demotix.
Tato anatin'ny volana vitsivitsy, tatitra  maro no nanamarina ny taha mahavarian'ilay fanolanana faobe tany Sodàna Atsimo, ny fanjakana tanora indrindra atsy Afrika .
Ny Firenena Mikambana ohatra, miampanga  ny tafika Sodàne Tatsimo ho mpanolana sy mpampijaly, anisan'izany ny fandoroana zazavavy mbola velona.
Ny tatitry  ny Vondrona Afrikana momba ny ady ao Sodàna Atsimo, izay navoaka ny volana lasa teo izao, misy andinindininy  mombanà vehivavy antitra sy tanora naolana ary navela nivoa-drà sy tsy nahatsiaro tena. Niantso ny hametrahana fitsaràna ny Vondrona Afrikana, mba hanenjika araka ny lalàna ireo tomponandraikitr'io fanitsakitsahana bevava ny zon'olombelona io.
Ady eo amin'ny tafiky ny governemanta manohana ny Filoha Salva Kiir, avy amin'ny foko Dinka, sy ireo mpikomy manohana ny Filoha Lefitra teo aloha Riek Machar, izay Nuer, ilay ady an-tranon'i Sodàne Tatsimo . Nanomboka ny 15 Desambra 2013 ilay ady, taorian'ny nandroahan'ny Filoha Kiir an'i Machar.
Tsy anavakavahana ireo fanafihana ara-nofo feno herisetra. Ampiasaina ho fitaovana amin'ny ady  ao amin'ny firenena ny fanolanana. Nampangaina  amin'ny tsy fandraisany fepetra ireo filoha any amin'ny faritra sy ny vondrona iraisam-pirenena satria mbola mitohy mijaly noho izany ihany vehivavy.
Heloka bevava atao amin'ny zanak'olombelona
Amin'ny Firenena Mikambana, heloka bevava atao amin'ny zanak'olobelona  ny fanolanana faobe. Ny taona 2008, nandray ny fanapahankevitra 1820  ny Filankvitry ny Firenena Mikambana momba ny Fiarovana, izay nilaza fa “azo raisina ho heloka an'ady, heloka bevava atao amin'ny zanak'olombelona, na hetsika mandrafitra ny famonoana faobe, ny fanolanana sy ireo endrika hafa amin'ny herisetra ara-nofo “.
Na teo aza ny fanapahankevitry ny Firenena Mikambana, tsy nisy fanjakana notànana ho tomponandraikitra  tamin'ny fampiasana ny herisetra ara-nofo ho fitaovam-piadiana amin'ny ady. Ary tsy maningana amin'izany ny fisehoan-javatra any Sodàna Atsimo. Eo anatrehan'ny antso avo mitombo hatrany  hidiran'ny mpanampy amin'ny maha olona, mbola mijanona mangina be ihany ny vondrona iraisam-pirenena manoloana ireo zava-doza ateraky ny herisetra ara-nofo.
Araka ny tatitry  ny Amnesty International, lasa tafiditra ho ampahany anatin'ny faritry ny fifandirana maneran-tany ny vatan'ireo vehivavy. Voalaza fa tsy ambim-bokatry ny ady fotsiny ny fanolanana sy fanararaotana ara-nofo, fa ampiasaina tsotra izao ho tetikady ara-tafika iniana atao ihany koa.
Niresaka ilay olana tao amin'ny Twitter, nanontany izao i Hannah McNeish, mpanao gazety miasa ho an'ny tenany any Afrika Atsinanana sy Afovoany:
Nahoana no zara raha mandre resaka herisetra ara-nofo avy any #SodànaAtsimo isika raha nilaza ny solotenan'ny Firenena Mikambana fa nahita ny ratsy indrindra tato anatin'ny 30 taona, ireo niharan'ny fanolanana >2?
‘Nahoana no zara raha ahenoana feo?’
Nanipika izao i Hal Dockins, mpisolovava eny amin'ny fitsaràna:
Solika amin'ny Toerana rehetra saingy mbola tsy fahampian-tsakafo, fanolanana, ary habibiana no zavamisy tena iainana marina any Sodàna Atsimo. Politika sy Fitiavan-karena.
Nanameloka ny Firenena Mikambana amin'ny tsy fanaovany na inona na inona i Mr Happiness:
@secgen Henatra ho an'ny firenena mikambana mamela ny hisian'ny fahoriana manerana ny Tany Sodàna Atsimo, miseho ao ny fanolanana sy ny famonoana faobe fa tsy misoka-bava kosa ny firenena mikambana
Namaly ny bitsika nalefan'i David Milliband, nanontany tena ny filoha sy Tale Jeneralin'ny Kaomitin'ny Fanavotana Iraisam-pirenena (IRC), Hannah McNeish, hoe nahoana i Sodàna Atsimo no tsy voaresaka be sahala amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongô (DRC):
@DMiliband Fikambanana mpanao soa maro no mandefa fanampiana any #SodanaAtsimo fa ny @theIRC irery ihany no mandray an-tànana ny trangan'ny fanolanana ao amin'ny “Unity” – Fitambarambeny. Nahoana no zara fa re feo toy izany, tsy sahala amin'ny #RDC?
Fitsipika roa ho an'ny politika ivelany
Misy ny resaka aroso hoe migoka ny tsimatimanota amin'ny taha ambony tokoa ny firenena toa an'i Sodàna Atsimo rehefa resaka herisetra ara-nofo noho ny tsy fahampian'ny fifandanjana eo amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny sehatry ny fametrahana ny politika ivelany:
Ny tsy fahampiana mampiahiahy anà vehivavy eo amin'ny sehatry ny fametrahana ny politika ivelany sy ny media.
Ireo vehivavy sy zazavavy no ankamaroan'ireo iharan'ny fanaovana ny fanolanana ho fitaovam-piadiana, saingy tsy mijery ny fanolanana ho mahatonga fandrahonana amin'ny filaminan'ny faritra kosa ny vondrona iraisam-pirenena. Napetrak'ireo fanjakana sy ny lalàna iraisam-pirenena tamin'ny toerany hatrizay ny fahasamihafan'ireo olan'ny filaminana sy ny fetran'ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy. Raha arahanan'ny vondrona iraisam-pirenena maso akaiky ireo olan'ny fitaovam-piadiana shimika sy biolojika, na ireo hetsik'ireo mahery fihetsika, ny fanolanana kosa eo ambany asan'ireo Fikambanana Tsy Miankina amin'ny Fanjakana sy ireo vondrona mpanohana ny vehivavy.
Manipika ny filàna fisoloan-tena bebe kokoa eo anivon'ireo sampana ambony indrindra amin'ny vondrona iraisam-pirenena izany. Raha tsy manaiky ny zon'ireo iharan'ny fanolanana ireo ny Firenena Mikambana sy ny tany hafa manontolo, ireo any Sodàna Atsimo sy ny hafa koa, hitohy mandrakizay io kolontsain'ny tsimatimanota io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/22/76607/
 fanjakana tanora indrindra atsy Afrika: https://globalvoices.org/2011/02/09/sudan-southern-sudan-becomes-africas-newest-nation/
 misy andinindininy: http://www.latimes.com/world/africa/la-fg-south-sudan-atrocities-20151028-story.html
 ilay ady an-tranon'i Sodàne Tatsimo: https://en.wikipedia.org/wiki/South_Sudanese_Civil_War
 fitaovana amin'ny ady: http://www.voanews.com/content/un-rape-used-as-weapons-of-war-in-south-sudan-conflict/2494281.html
 heloka bevava atao amin'ny zanak'olobelona: https://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_humanity
 fanapahankevitra 1820: http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sc9364.doc.htm
 tsy nisy fanjakana notànana ho tomponandraikitra: http://globaljusticecenter.net/blog/?p=55
 ny tatitry: http://news.bbc.co.uk/2/hi/4078677.stm